भिडियो लाइभ गर्दै बन्दुकधारीले गरे मस्जिदमा आएका दर्जनौंको हत्या – जलजला अनलाइन
अन्तराष्ट्रिय मुख्य समाचार
भिडियो लाइभ गर्दै बन्दुकधारीले गरे मस्जिदमा आएका दर्जनौंको हत्या
Posted on March 15, 2019 Author Jaljala Online	Comments Off on भिडियो लाइभ गर्दै बन्दुकधारीले गरे मस्जिदमा आएका दर्जनौंको हत्या
चैत १, काठमाडौं । न्यूजिल्याण्डको क्राइस्टचर्चस्थित दुई मस्जिदमा भएको गोलीबारीमा थुप्रै हताहत भएको पुलिसले जानकारी दिएको छ ।
डेली मेलको रिपोर्ट अनुसार २८ वर्षे अष्ट्रेलियाली नागरिक मानिएका एक व्यक्तिले अन्धधुन्ध गोली चलाई २७ जनाको हत्या गरेका छन् । प्रहरीले यसबारे आधिकारिक संख्या दिएको छैन ।
प्रत्यक्षदर्शीले ती बन्दुकधारीले क्राइस्टचर्चस्थित अल नुर मस्जिदमा ५० सट गोली हानेको र उनीसँग सेमी–अटोमेटिक सटगन र राइफलसमेत भएको बताएका छन् ।
ती बन्दुकधारीले अल नुर मस्जिदभित्र लाइभ–स्ट्रिम गर्दै अन्धधुन्ध गोली चलाएका थिए । घटना नेपाली समयअनुसार शुक्रबार बिहान सवा ६ बजेको हो ।
डेली मेल अष्ट्रेलियाको एउटा भिडियोमा एक व्यक्तिले भागिरहेका मानिसहरुमाथि दर्जनौं पटक गोली चलाइरहेको देख्न सकिन्छ । एक अभियुक्तलाई पक्राउ गरिएको छ तर ती बन्दुकधारी नै हुन् भन्ने पुष्टि भइसकेको छैन ।
साथै, लिनवुड मस्जिद नजिकै पनि बन्दुक चलेको आवाज सुनिएको बताइएको छ । उक्त मस्जिदभन्दा तीन किलोमिटर टाढा कारभित्र बमसमेत फेला परेको डेली मेलले बताएको छ ।
यसका साथै, क्राइस्टचर्च अस्पताल बाहिर पनि गोलीबारी भएको रिपोर्ट प्रकाशित भएको छ । पुलिसले प्रभावित इलाकाका जनतालाई स्थिती संकटपूर्ण भएका बताउँदै आफ्नो घरभित्रै बस्न आग्रह गरेको छ ।
न्यूजिल्याण्डको भ्रमण गरिरहेको बंगलादेश क्रिकेट टिमका खेलाडीले ट्वीटरमा आफूहरु गोलीबारीमा सुरक्षित बच्न सफल भएको जानकारी दिएको छ । मस्जिदमा आज जुमेको नमाज थियो ।
पुलिस अधिकारी माइक बुश अनुसार एक व्यक्तिलाई हिरासतमा लिइएको छ । उनले भने, ‘हमलामा अन्य व्यक्ति पनि समावेश छन् कि भनेर अनुसन्धान भइरहेको छ । यदि कोही व्यक्ति मस्जिद जाने तयारीमा हुनुहुन्छ भने आज नजानुहोस् । अर्को जानकारी नआउञ्जेल घरको ढोका बन्द राख्नुहोस् ।’
न्यूजिल्याण्डका प्रधानमन्त्री जसिन्दा आर्डर्नले उक्त आक्रमण न्यूजिल्याण्डको कालो दिनमध्येको एक बताएकी छिन् । ‘मलगायत न्यूजिल्याण्डका प्रत्येक जनता पीडित परिवारको साथमा छौ,’ उनले भनिन् ।
हमलाको भिडियो स्ट्रिमः
ती बन्दुकधारी अल नुर मस्कमा दिउँसोको प्रार्थना भइरहेका बेला प्रवेश गर्छन् र अन्धधुन्ध गोली चलाउँछन् । २८ वर्षे ती व्यक्तिको फेबबुकमा राखिएको भिडियो स्ट्रिममा देखिए अनुसार उनले सय बढी फायरिङ गरेका छन् ।
सैनिकको झैं लुगा र हेलमेट लगाएका ती व्यक्तिले ‘अब यो पार्टी सुरु गरौं’ भन्दै आफ्नो ‘ताण्डव’ देखाउँछन् । गाडीमा राखिएका कम्तिमा ६ बन्दुकमध्ये एक उठाएर उनी मस्जिद भित्र छिर्छन् र आफूले देखेजति सबैलाई गोली ठोक्छन् ।
उनले प्रार्थनामा आएका सबैलाई गोली हान्छन् । कतिपय अवस्थामा उनले यत्तिकै पनि फायरिङ गरिरहेका छन् ।
उनले बन्दुक चलाउन छोडेका बेला घाइतेको दुखाईको आवाज सुन्न सकिन्छ । उनले थुप्रै पटक ‘रिलोड’ गर्छन् । थुप्रै पटक उनी घाइते व्यक्तिमाथि चढेर बन्दुक रिलोड गरेको र पुनः गोली चलाएको भिडियोमा देख्न सकिन्छ ।
कक्षा १ मा भर्ना गर्न ८८ हजार ! सरकार, यो भन्दा ठुलो लुट अरु केही छ ?
Posted on April 1, 2018 Author Jaljala Online
चैत १८, काठमाडौं । नयाँ शैक्षिक सत्रमा भर्नाका लागि निजी विद्यालयहरुले मनपरी शुल्क असुलिरहेका छन्। शुल्क तोक्ने जिम्मेवारीबाट केन्द्र र स्थानीय सरकार एकअर्कालाई देखाएर पन्छिएपछि निजी विद्यालयले जथाभाबी शुल्क असुल्न थालेको र त्यसको मारमा अभिभावक परेका छन्। रुवी रौनियारले नागरिक दैनिकमा लेख्नुभएको छ । शिक्षा नियमावलीअनुसार संस्थागत (निजी) विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा तीन […]
दाङमा बस र मोटरसाईकल ठोक्किँए, श्रीमान–श्रीमती गम्भीर घाईते
Posted on October 11, 2018 Author Jaljala Online
असोज २५, दाङ । दाङमा बस र मोटरसाइकल एकआपासमा ठोक्किँदा दुई जना गम्भीर घाईते भएका छन् । बिहीबार बिहान दंगीशरण गाउँपालिका वडा नं. ७ श्रीगाउँमा ग १ ख ७७०३ नम्बरको बस र रा २ प २८६९ नम्बरको मोटरसाईकल एक आपसमा ठोक्किदा श्रीमान–श्रीमती गम्भीर घाईते भएका हुन् । दुर्घटनामा परि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २ निवासी […]
दाङमा ६ दिनसम्म पनि किन उठेन १६ बर्षीय युवकको शव, यस्तो छ भित्री कारण
Posted on September 17, 2018 Author Jaljala Online
असोज १, दाङ । करेन्ट लागेर मृत्यु भएका दाङ तुलसीपुर ८ कट्कुईयाका १६ बर्षीय कपिलराज डाँगीको शव आफन्तले बुझेका छैनन् । यही भदौ २७ गते बुधबार करेन्ट लागेर मृत्यु भएका कपिलराज डाँगीको शब आफन्तले बुझ्न मानेका छैनन् । उनको शबलाई राप्ती अञ्चल अस्पतालको शबगृहमा राखिएको छ । घटना रहस्यमय रहेको भन्दै शब नबुझेका उनका काका […]
दाङमा घट्यो पहिलोपटक यस्तो अचम्मको घटना
१६ वर्षे किशोरी नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि मनोनयन सूचीमा यसरी परिन
वार्ताका लागि विप्लव नेकपाका यस्ता छन् सर्त, अब के गर्छ सरकार ?
खाजा पसलमै यौन धन्दा डिल, यस्तो छ अघोषित रेडलाइट एरियाको कथा(भिडियो)
वयस्क पुरुषले एक रातमा कति पटक यौनसम्पर्क गर्न सक्छ ? जानी राखौ
राजधानीबाट स्कर्पियो झिकाएको गोप्य सूचना प्रहरीसँग पुगेपछि…
किन पुरुषलाई यौनसम्पर्क राख्नेवित्तिकै निन्द्रा लाग्छ ? जानुहोस अचम्मको भित्रि तथ्य
दाङका बिभिन्न स्थनमा आगलागी हुँदा करिब ३७ लाख क्षति
पीआरका लागि अस्ट्रेलियामा नयाँ नीति, के-के छन् परिवर्तनहरू ? जानुहोस
‘काफलडाँडा’ अपरेशन: हेमन्तप्रकाशलाई समाउन खोज्दा प्रहरीले चश्मा र औषधिमात्रै भेटायो